Hogaamiyeyaal siyaasadeed oo dalbaday in xilka laga qaado wasiirka arrimaha gudaha – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyeyaal siyaasadeed oo dalbaday in xilka laga qaado wasiirka arrimaha gudaha
Star FM November 22, 2016
Qaar ka mid ah hogaaniyeyaasha siyaasadeed ee kasoo jeeda ismaamulka Laikipia ayaa dalbaday in xafiiska laga eryo wasiirka arrimaha gudaha iyo isku duwidda amaanka qaranka Joseph Naissery, kadib markii ay ku eedeeyeen in uu qeyb ka leeyahay masuuliyadda weerarro qasaare geystay oo ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolkaasi.
Siyaasiyiinta arrintaan shaaciyay ayaa kala ah xildhibaanka degmada bariga Laikipia Anthony Mutahi, xikdhibaanadda sida magacaabista ah kusoo gashay barlamaanka ee Sarah Lekorere iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga Jubilee Christopher Maitho.
Wasiirka ayaa lagu dhaliilay in uu ku guul dareystay difaacidda dadka shacabka ah xili ay Laikipia ka dheceen isku dhacyo u dhexeeyay dad beeraley ah iyo kuwo xoolo dhaqato ah.
Hogaamiyeyaashaan ayaa sidoo kale wasiirka ku dhaliilay in uusan si caddaalad ku dhisantahay u gudanin xilkiisa, sidaas awgeedna uusan u qalmin jagadaasi.
Mr Nkaissery ayaa dhankiisa marar badan horay u beeniyay dhaliilo noocaan ah oo loo jeediyay, xili uu hadda howlgal hub ka dhigis qasab ah uu ka socdo maamul goboleedyo ka tirsan gobolka Rift Valley.
Mudadii 3 bilood ahayd oo lasoo dhaafayba weeraro iyo isku dhacyo waxyeello sababay ayaa laga soo tabinayay ismaamul goboleedka Laikipia oo ka mid ah meelaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dalka kudhuftay.
← Mucaaradka South Korea oo doonaya in xilka laga qaado madaxweynaha
Golaha garyaqaannada LSK oo loogu baaqay in ay taageeraan mucaaradka →